ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): June 2009
(၆၄)နှစ်မြောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့မင်္ဂလာူပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း (စင်္ကာပူ)
“(၆၄)နှစ်မြောက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့မင်္ဂလာ” ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း
(၂၁ရက်၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၀၉)
“(၆၄)နှစ်မြောက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့မင်္ဂလာ” အား ဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် မြန်မာ့အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ တိုပါးရိုးရှိ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဘုန်းကြီးများအား “အာရုံဆွမ်း ကပ်လှူခြင်း”၊ မနက်(၁၁)နာရီမှ စတင်၍ တက်ရောက်လာကြသော မြန်မာ့အရေး စိတ်ဝင်စားသူများ၊ သွေးလှူရှင်များအား “မုန့်ဟင်းခါး၊ လက်ဖက်ရည်ဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်း”၊ တက်ရောက်လာသူများမှ “မွေးနေ့ဆုတောင်းများ ရေးသားခြင်း”၊ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓါတ်ပုံပြပွဲ” အား ကြည့်ရှုခြင်း၊ မြန်မာ့အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများမှ “ကဗျာရွတ်ဆို ဂုဏ်ပြုခြင်း”၊ နေ့လည်(၁)နာရီတွင် “တရားနာယူခြင်း နှင့် စုပေါင်းမေတ္တာပို့သခြင်း”၊ နေ့လည်(၂)နာရီတွင် သွေးလှူဒါန်းသူပေါင်း (၉၆)ယောက် အနက်မှ စုစုပေါင်း (၇၂)ယောက် အောင်မြင်စွာ “စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းခြင်း” တို့အား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်ကျင်းပနိုင်ရန် တက်ရောက်လာကြသော မြန်မာ့အရေး စိတ်ဝင်စားသူများ၊ သွေးလှူရှင်များ နှင့် အဖက်ဖက်မှ တတ်အားသရွေ့ ၀ိုင်းဝန်းကူည်ီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများအား မြန်မာ့အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများမှ လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့် နောက်နောင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင် တက်ကြွစွာ စုပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံများကို အောက် ဖေါ်ပြပါ လင့်ခ်များတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မြန်မာ့အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ (စင်္ကာပူနိုင်ငံ)
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 3:07 PM2comments Links to this post
Labels: DawAungSanSuKyi, Myanmar, Overseas Burmese Patriots, Photos
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၄နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းကျွေးတရားနာနှင့် စုပေါင်းမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပွဲ ဖိတ်ကြားစာ (စင်္ကာပူ)
Dear fellow Burmese citizens
You are cordially invited to the special event of celebrating the 64th birthday of our beloved Daw Aung San Suu Kyi in appreciation of her sacrifices for the country, her noble qualities and especially her unrivalled role of being the national leader our time.
We will be serving the monks with breakfast, the attendees with lunch and listening to dhamma discourse and havingaprayer session for her liberty.
Venue: Toa Payoh Burmese Buddhist Temple
Time: 11 am ~2pm, 21 June 2009, Sunday
(a) 11 am ~ 1 pm: Serving the attendees with lunch (Mok-Hin-Kha)
(b) 1 pm ~2pm: Listening to Dhamma discourse + having prayer session
Once again, let's come together in love of Daw Suu and Burma.
Please kindly forward this invitation far and wide.
(on behalf of the organizers)
Contact: (65) 9227 6490
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 8:43 AM0comments Links to this post
Labels: DawAungSanSuKyi, Events, Invitation
Melaka သို့ အလည်တစ်ခေါက်
( Photo ; http://www.ecomaxmc.com/images/melaka.jpg )
လွန်ခဲ့သော ရက်ပိုင်းခန့်က မလေးရှားနိုင်ငံ ၊ Melaka မြို့ကို တစ်ညအိပ် .. နှစ်ရက်ခရီး အလည်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ ဒီကျွန်းလေးပေါ်က ထွက်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ အရာအားလုံးက မတူညီစွာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ ၂၀၀ ကီလိုမီတာ ကျော်ခရီးကို အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာ ခပ်မြန်မြန်စိတ်ကြိုက် ကားမောင်းလို့ရတာကြောင့် စိတ်ပျော်ရွှင်တက်ကြွနေတဲ့ ချစ်သူနဲ့ ဘေးနားမှာ မြင်သမျှ ရှုခင်းကို စိတ်ကြည်နူးစွာကြည့်ရင်း ကားအရှိန်ကြောင့် ရင်တမမနဲ့ လိုက်လာခဲ့တဲ့ ကျွန်မတို့ ခရီးစဉ်ကို သူက “ဒုတိယအကြိမ် ဟန်းနီးမွန်းခရီး”လို့ ပြောဆိုရယ်မောနေခဲ့တယ်။
မရောက်ဖူးသော ဒေသဖြစ်တာကြောင့် မြေပုံတစ်ခုနဲ့ GPS ခရီးသွားလမ်းညွှန်လေးတစ်ခုကို အားကိုးပြီး နှစ်ယောက်သား အလုပ်များလွန်းတဲ့ စင်္ကာပူကျွန်းမှ ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။ စင်္ကာပူနယ်မြေထဲက ထွက်သွားတာနဲ့ ကားမောင်းသူများ အကျင့်စရိုက်လေးတွေ ကွာခြားတာကို သတိပြုမိခဲ့တယ်။ စင်္ကာပူမှာ ကားမောင်းသူအများစုဟာ စိတ်လုံးဝမရှည်သူ များပြီး တစ်စက္ကန့်တောင် စောင့်ဆိုင်းနိုင်ကြခြင်းမရှိပါဘူး။ မလေးရှားနယ်မြေဘက် အထူးသဖြင့် မြို့ထဲတွေမှာ အားလုံးဟာ ပုံမှန်လေးပဲ လှုပ်ရှားသွားလာကြရင်း အနည်းငယ်လေး စောင့်ဆိုင်းရတာ ၊ မတော်တဆ လမ်းလေးမှားသွားရင် ဟွန်းဆက်တိုက်တီးတာတွေ .. စိတ်တိုသောပုံစံတွေ မတွေ့ရဘဲ အားလုံးအေးအေးဆေးဆေးရှိကြတာကို သတိပြုမိရင်း ထိုအချက်ကလေး တစ်ချက်ကို ချီးကျူးမိပါတယ်။
Melaka မြို့ထဲဝင်ဝင်ချင်းလေးမှာပဲ ဗိုက်ဆာလာတာနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုခုကို မနည်းရှာခဲ့ရတယ်။ ထိုင်းအစားအသောက်လို့ ကြေငြာထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးမြင်မှ ထိုဆိုင်ကို ၀င်ကြည့်ခဲ့တယ်။ သိပ်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့ ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးနဲ့ လှပသော အပြင်အဆင်လေးတွေကို ကြည့်ရင်း သဘောကျမိသွားတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်စွာ .. ကျွန်မတို့စားပွဲကို menu လာချပေးတဲ့ စားပွဲထိုး မိန်းကလေးက မြန်မာဖြစ်နေတယ်။ သူမနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်နေသော အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်လည်း မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတယ်။ သူမတို့နှစ်ဦးက ကျွန်မတို့ ဇနီးမောင်နှံကို ရင်းနှီးခင်မင်စွာ စကားပြောဆိုရင်း နောက်တစ်ခါ အလည်ထပ်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။
ဆိုင်အပြင်အဆင် လှပသပ်ရပ်ရှင်းလင်းမှုလေးကို သဘောကျရင်း Interior Designer ကို ချီးကျူးနေတဲ့ ကျွန်မ .. အရသာကောင်းမွန်သော အစားအသောက်နှင့် သင့်လျော်သော ဈေးနှုန်းကြောင့် ထပ်မံသဘောကျမိသွားပါတယ်။ Melaka မြို့ကို အလည်သွားဖြစ်ခဲ့ရင် King Hotel ပထမထပ်က ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်လေးကို အားပေးဖို့ လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဟိုတယ်မှာ ပစ္စည်းတွေချ ၊ ခဏနားပြီးမှ အပြင်ထွက် လည်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အစက Johor ကို ခဏအလည်သွားရန် စီစဉ်ထားပြီးမှ ခရီးစဉ်ကို Melaka ဘက် ပြောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ စင်္ကာပူလောက် မသန့်ရှင်းတာကလွဲရင် မဆိုးပါဘူးလို့ မြို့ထဲမှာ ကောက်ချက်ချမိတယ်။ ထိုမြို့မှာ သစ်ပင်တွေ နည်းတာကို ကျွန်မ သိပ်မနှစ်သက်မိခဲ့ဘူး။ တိုက်အိမ်တွေအားလုံး ပြည့်နေပေမယ့် စိမ်းစိုသော သစ်ပင်က နည်းပါးလွန်းတယ်။ တစ်မြို့လုံးကို ပြင်းထန်စွာ ဖြာကျနေသော နေအရှိန်က တော်တော်လေး ပူပြင်းပါတယ်။ နေပူများကြားမှပဲ ကျွန်မ သိပ်သွားချင်သော နေရာအချို့ကို လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။
ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် St. Paul’s Church
ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် St.Paul's Church နှင့် Eye on Malaysia, Ferris Wheel ကို အလည်ရောက်သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ Ferris Wheel စီးရင်း ထိုနေရာဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်ဖို့ အများကြီးလုပ်သင့်သေးကြောင်း ကျွန်မ သတိထားမိတယ်။ သေချာတည်ဆောက်ထားရမည့် အများသုံးသန့်စင်ခန်းမှအစ ပိုမိုစည်ကားသပ်ရပ်သွားစေဖို့ အရာတော်တော်များများ အများကြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
Melaka မှာ ကျွန်မအတွက် ဒုက္ခအရောက်ဆုံးက “အိမ်သာ”တွေ အလွန်မသန့်ရှင်းခြင်းပါပဲ။ နည်းနည်းလေးဆိုရင်တောင် သိပ်ရွံတတ်တဲ့ ကျွန်မအတွက် သိပ်အခက်ခဲဖြစ်ရပါတယ်။ ကျွန်မ အပေါ့သွားရင်တောင် ဘာမှသိပ်မကြည့်မိအောင် မျက်လုံးကို သတိထားရပါတယ်။ တည်းခိုတဲ့ Holiday Inn ဟိုတယ် ပြန်ရောက်မှပဲ ကျွန်မ သေသေချာချာ သန့်စင်ခန်းဝင်ဖြစ်တယ်။ အဆိုးဆုံးက Shopping Mall ကြီးမှာရှိတဲ့ အိမ်သာတွေတောင် တော်တော်ညစ်ပတ်ခြင်းပါပဲ။ အလုပ်သမားတွေ ရှိပေမယ့်လည်း သုံးစွဲသူတွေ လုံးဝစည်းကမ်းမရှိဘူးလို့ ကျွန်မ မြင်မိတယ်။
ပထမရက်မှာ ထိုမျှလောက်ပဲ လည်ပတ်ခဲ့ရင်း ညစာစားရန်အတွက် ပင်လယ်စာစားချင်တာကြောင့် အနီးဆုံးဆိုင်ကို သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ မိမိဒေသမဟုတ်တာကြောင့် ခပ်ဖြေးဖြေးမောင်းနှင်ရင်း ဆိုင်ကို သေချာရှာခဲ့ရတယ်။ မြို့ထဲနှင့် အနည်းငယ်ဝေးပြီး ကျယ်ဝန်းသောနေရာတစ်ခုမှာ နေရာယူထားတဲ့ ဆိုင်ကို နှစ်ဦးသား ရောက်သွားရင်း ချစ်သူစိတ်ကြိုက် အစားအသောက်တွေကိုပဲ မှာခိုင်းလိုက်တယ်။ ဂဏန်း ၊ ခရု မစားတဲ့ ကျွန်မအတွက် ပင်လယ်စာကို သိပ်မက်မောခြင်းမရှိခဲ့။ အုန်းထမင်းခပ်မွှေးမွှေးကို ငှက်ပျောဖက်လေးတွေနှင့် သေချာထုပ်ပေးထားရင်း အစားအသောက်တွေက အရသာကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းသင့်လျော်ပါတယ်။
ဒုတိယရက်မှာ ကျွန်မ အဓိကသွားချင်ခဲ့သော “Cultural Museum” ကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။. ပြတိုက်နန်းတော်ကြီးရဲ့ တည်ဆောက်ထားပုံကို သဘောကျမိတယ်။ ပြတိုက်နန်းတော်တွင်းမှာ ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဝတ်စုံများ ၊ နိုင်ငံမျိုးစုံမှ ကုန်သည်များ လာရောက် စီးပွားရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်ကြပုံ ၊ နန်းတွင်းရေးရာ သမိုင်းများ ၊ ဘုရင်နှင့် ရာထူးအလိုက် နန်းတွင်းဝန်ကြီး အကြီးအကဲများ ညီလာခံကျင်းပနေပုံ ၊ နန်းတွင်းအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။
ဘုရင်နှင့် မှုးမတ်ဝန်ကြီးများ ညီလာခံကျင်းပနေပုံ
ထိုပြတိုက်ကြီးရဲ့ ထည်ဝါလှပမှုကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဖတ်မိကတည်းက ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာကြောင့် အလည်ပတ်ရောက်သွားခဲ့ချိန်မှာ စိတ်ကျေနပ်မိရင်း အမိမြေက တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်သမိုင်းများရှိရာကို ကျွန်မ မရောက်သေးတာ သတိတရဖြစ်မိတယ်။
နန်းတွင်းပြတိုက်မှာ လည်ပတ်ပြီးချိန် Mahkota Parade Shopping Centre မှာ ဈေးဝင်ဝယ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မ စိတ်ကူးထဲမှာ လိုချင်နေခဲ့သော ဒီဇိုင်းအချို့အင်္ကျီကို ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ရင်း စင်္ကာပူမှာ ဈေးဝယ်တာလောက် ငွေမကုန်တဲ့အတွက်လည်း ကျေနပ်မိတယ်။
Mini-Malaysia & Mini-Asean Village ဓာတ်ပုံလေးတွေကို အင်တာနက်မှာ မြင်ကတည်းက သွားချင်ခဲ့သော ကျွန်မ ထိုနေရာကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်။ အာဆီယံအလံတွေထဲမှာ မြန်မာအလံကို တွေ့ရတာနဲ့ အမိမြေအလံနှင့်အတူ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ချစ်ဖို့သိပ်ကောင်းတဲ့ အိမ်ကလေးတွေကို နှစ်သက်မိရင်း တစ်အိမ်စီရဲ့အတွင်းမှာ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ မတူညီသော နေထိုင်ပုံဓလေ့တွေကို ပြသထားပါတယ်။
အသွားချင်ဆုံး နေရာတွေကို လည်ပတ်ပြီးချိန် .. စင်္ကာပူကို ကျွန်မတို့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သော လမ်းခရီးကြောင့် နှောင့်နှေးခြင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ချောချောမောမော ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်မ သွားချင်သေးသော နေရာအချို့ကို အချိန်အခက်အခဲကြောင့် မရောက်ခဲ့သေးပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ်မှာ သွားဖြစ်ဖို့ စိတ်ကူးထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ထားမိတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် …….. အမိမြေရဲ့ နေရာတော်တော်များများကို အနည်းဆုံး အလည်တစ်ခေါက်လောက် ကျွန်မ သွားလည်ပတ်ရင်း နွေးထွေးသော လေထုအောက်မှာ ၀မ်းသာကျေနပ်စွာ နေထိုင်ချင်ပါသေးတယ် ……. ။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 4:27 PM 10 comments Links to this post
Labels: Lin Let Kyal Sin, Trip
(၆၄)နှစ်မြောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အော...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၄နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ...